UKUSETSHENZISWA KWEMINDLA NEMPILO: UMartin Vrijland
Ingxoxo: 'Ingabe i-DMT inhle kuwe noma cha?' Lo muntu wabona ngokuzumayo ngokusebenzisa ukufaniswa
ahanjiswe UKUSETSHENZISWA KWEZINDABA, IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-13 Agasti 2018	• 2 Amazwana
Nakuba esihlokweni yami langaphambilini ku DMT, ketshezi eziqukethwe akhishwa impande-like njengoba Ayahuasca futhi Iboga, ibonisa ukuthi nina kutsha ukusebenza transceiver ku ikhodi Saturn, kukhona avele izimpawu seep kusuka kubantu izinto ezivezayo zangempela ziqala ukubona ngokusetshenziswa kwe-DMT. [...]
Singakwazi yini ukulawula umphumela walesi simulation?
ahanjiswe UKUQALA, UKUSETSHENZISWA KWEZINDABA, IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-8 Agasti 2018	• 9 Amazwana
Nakuba ngisemncane kakhulu ngase ngiqaphele ukuthi ukholo aluhlangene noNkulunkulu onothando, kodwa ikakhulukazi ngokwesaba, kuyangijabulisa ukuthi abantu abayizigidigidi bathathwa kanjani uhlelo lwabo lokukholelwa futhi bavumele impilo yabo yonke ibe yinqunyiwe yiyo. Manje hhayi kuphela ukholo kuNkulunkulu, Allah, uJesu, [...]
Imiphumela efana ne-ayahuasca ye-DMT kanye nomsebenzi we-gine pineal
ahanjiswe UKUSETSHENZISWA KWEZINDABA	by UMartin Vrijland	ngo-6 Agasti 2018	• 5 Amazwana
Ngiphakanyiswa njalo ukuzama into efana ne-DMT ngendlela yama-ayahuasca noma amanye ama-DMT aqukethe ama-agent. Kubonakala sengathi le nto ivuselela i-pineal gland, ibangele uhlobo oluthile lokuhlangenwe nakho kokufa nokuba nakho konke okungahle kwenzeke emzimbeni. Manje ngizame ezinye izidakamizwa ku- [...]
Ubani odala uLusifa futhi yiziphi amademoni, ama-jinns noma ama-archons emfanekisweni wokufanisa?
ahanjiswe UKUQALA, UKUSETSHENZISWA KWEZINDABA, IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-5 Agasti 2018	• 6 Amazwana
Ikakhulukazi kusukela engela labo yalelozwe kobuKristu noma kobuSulumane ngivame uthole umbuzo: Uma ucabanga yonke idale sekulingisa Luciferian, owabe wadala Lucifer kanjani mayelana nalawo mademoni djinns, archons? Ngingathanda ukucacisa lokhu kulesi sihloko futhi nami [...]
Ingabe inqubo ye-anchor ye-Google ye-Regmented Reality (AR) ifakazela inkolelo yokuthi indawo yonke iyisimo sokufanisa?
ahanjiswe UKUQALA, UKUSETSHENZISWA KWEZINDABA, IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-5 Agasti 2018	• 4 Amazwana
Ngemva atikili ambalwa zilotshwé mayelana nomqondo ukuthi mina nawe e isengezo engokoqobo ukuphila, kufakazelwa kuhlanganiswe ngobuciko izimpendulo eziningi ukuthi abafundi abasakwazi ukushaqeka. Njengoba sengichazile ukuthi isimiso 'izihibe quantum "into edingekayo ukuthi Einstein theory yakithi futhi kubukela phansi ngejubane lokukhanya (njengoba physics umngcele ngokomzimba), [...]
Abantu abaningi baqala ukubona ukuthi siphila ekufaniseni: yingakho
ahanjiswe UKUQALA, UKUSETSHENZISWA KWEZINDABA	by UMartin Vrijland	ngo-3 Agasti 2018	• 9 Amazwana
Rizwan ( "riz") Virk kuyinto usomabhizinisi yimpumelelo, zimali, bestselling umbhali, iphayona umkhakha isiqophi umdlalo nezizimele ifilimu umkhiqizi. Esizwa okuhlangenwe nakho kwakhe inthanethi isiqophi imidlalo kanye cwaningo zihlanganisa quantum physics nokunyakaza zenkolo, wafika esiphethweni sokuthi kungenzeka kakhulu ukuthi yabadlali abaningi esingokoqobo virtual umdlalo bukhoma. [...]
Yini esingayenza ukuze sixazulule izinkinga zethu? Isenzo spooky kude!
ahanjiswe UKUQALA, UKUSETSHENZISWA KWEZINDABA, IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-1 Agasti 2018	• 4 Amazwana
Amavidiyo angezansi anikeza ukuqonda okuncane emcimbini wokungena kwe-quantum. Ukuhunyushwa kwesiNgisi kwalokhu kungenwa kwe-quantum. Uma ubukela ividiyo engezansi ungathola umuzwa omncane mayelana nokuthi lisho ukuthini leli gama. I-term quantum entanglement iyasiza ukuqonda, ngoba ngombono wami itho okuningi ngokuphila kwethu. Esihlokweni sami sangaphambilini ngine [...]
ahanjiswe UKUQALA, UKUSETSHENZISWA KWEZINDABA, IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-30 Julayi 2018	• 22 Amazwana
Uyazi ukuthi konke okubonayo kuphela kubonakala lapho kubonakala? Lokhu kubonisa ukuhlolwa okuphakathi kwekhulu elilodwa elibizwa ngokuthi i-double slits (ukuvulwa kokubili). Izazi ze-physum ze-Quantum emhlabeni wonke zenze lokhu kuhlolwa kaningi izikhathi, ngoba kwaholela ekungakholweni okuningi futhi ngasikhathi sinye ngokumangalisa okukhulu kangaka. Kuyinto ukutholakala ukuthi [...]
Izithombe zomprofethi Muhammad (ukuthula makube phezu kwakhe) nomncintiswano we-cartoon weGeert Wilders
ahanjiswe UKUSETSHENZISWA KWEZINDABA, IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-27 Julayi 2018	• 12 Amazwana
Ngiye ngabona ezinkulumweni zikaSheikh Imran Hosein, engithanda ukumlalela ngenxa yokuhlaziya kwakhe komlando kanye nezindaba zamanje ngokuphathelene nobuprofetho bamaSulumane, ukuthi amaSulumane cishe akalokothi aqambe igama lomprofethi Muhammad futhi uma enza bayengeza isigwebo sonke kuso. [...]
UJesu unguMsindisi wabo bonke abazinikela kuye! Noma ingabe i-Islam yindlela kuphela yeqiniso?
ahanjiswe UKUSETSHENZISWA KWEZINDABA, IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-26 Julayi 2018	• 48 Amazwana
Ngithunyelwe indaba namhlanje mayelana nokuhlukunyezwa kwezingane ezincane nezinsana ezazisetshenziswa kuze kube yiminyaka engu-80 ngaphandle kwe-narcosis, ngoba isimiso sezinzwa sasingakaqali. Ngincoma ukuthi ufunde lesi sihloko kuqala ngaphambi kokuqhubeka lapha. Eqinisweni, kungenxa yokuhlukunyezwa. Ukuhlukunyezwa kokuqala [...]
Ukuvakashelwa okuphelele: 1.370.334